Taariikhda My Butros » Ammaanka xubnaha ka yahay Our Top Mudnaanta,en
Last updated: Oct. 25 2020 | 2 min akhri
ammaanka Online had iyo jeer waa safka hore ee maskaxda, sidaas darteed waxaan doonayay inaan idin xusuusiyo kasta oo aynu qabanayno in ay sii xubnaheenna ammaan ah oo aad loo hubiyo in aan ka go'an in ay tahay in aad la siinayo suurto gal ah waayo-aragnimo shukaansiga online ugu ammaansan.
Halkan waxa aannu ku samayn lahayn…
Xafiiska Invest in technology anti-scammer warshadaha-keentay
farsamooyinka Scammer waxa ay noqonayaan more sare oo sii kordheysa adag tahay in la garto. Laakiin tahay waxaan samaynaynaa wax walba oo aan awoodno si ay marti u sii.
Waxaan la isticmaalayo Scamalytics technology anti-scammer waayo, 2 sano haatan. Xogta saamiyada qalab scammer guud ahaan warshadaha shukaansiga online iyo caawiyaa kooxda ee Moderators tababaray scammers kaalinta iyo iyaga ka DateMyPet.com saar ka hor inta aysan xitaa saamayn xubnaheenna. Scamalytics sidoo kale auto-ogaadaa scammers oo Fayda Bots, iyo sidoo kale bixinta kooxda la 'daboosho' macluumaad oo aan la arki karo in ay indhaha aadanaha.
Ku hubaysan aqoon this, kooxda adeegga macaamiisha ay fiican tahay in goobjooga isbeddellada scammer oo iyaga ka dhaqaajiyo si dhakhso ah.
tababarka joogtada ah ee kooxaha adeegga macaamiisha
Waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha oo kaliya in industry ee kooxda noo gaar ah ee-guriga adeegga macaamiisha, iyadoo kooxaha taageerada xubin loogu talagalay si dhexdhexaad ah iyo daryeelka macaamiisha. Kooxdayada oo ah 60 shaqada 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii, 365 maalmood ee sanadka si ay u siiyaan daryeelka-time-zone in xubnaha oo dhan adduunka oo dhan.
Waxaan qaban macaamiisha joogtada ah iyo joogto ah diiradda tababarka, lagu doonayo in si joogto ah loo horumariyo adeegyada iyo in la xaqiijiyo nabdoonaanta xubnaha our.
jeer si dhexdhexaad ah Fast
tababaray Our screen kooxda dhexdhexaad ah oo dhan content user-ahbaa si loo xaqiijiyo profiles gudbisay waa dhab. Tani waxay ku lug sawirada falanqeeyo, profiles, entries qorka, videos iyo fariimaha hore ee gaarka loo leeyahay si loo hubiyo in shuruudaha u qalmidda xubin ka yihiin kulmeen goobta shaqsi ama network.
Si jeer si dhexdhexaad ah hoos ugu badnaan 10 daqiiqadii bartilmaameedka, kooxda dhexdhexaad ah waxay leeyihiin aragti cad oo jeer ogolaansho si ay ula socdaan karaan waxqabadka inta ay shaqada. jeer Dhexdhexaadinta ayaa hadda ku jira cajiib ah 7.5 daqiiqo!
tababare shukaansi oo bixiya taageero iyo talo
Sidoo kale daryeel macaamiisha tayo sare leh in dadka isticmaala oo dhammuba aannu marno, kooxda ayaa sidoo kale u dhaqmaan sida tababarayaasha shukaansi, xubnaha caawiyo kuwa halgan kula dhinaca farsamo ama kuwa daters online khibrad yar si aad u hesho ugu soo baxay ay waayo-aragnimo shukaansi.
kooxda daryeelka macaamiisha ayaa ku siiyaan talo ku saabsan sida loo abuuro profile ah in gaaro natiijooyin wanaagsan, sida loo amaan iyo waxa laga filan karo marka shukaansi online.
Qayb FREE >